ShweMinThar: ​ရေပန်းစားတဲ့ Six Pack သိပ္ပံ နည်းကျ ​လေ့ကျင့်​မယ်​
​ရေပန်းစားတဲ့ Six Pack သိပ္ပံ နည်းကျ ​လေ့ကျင့်​မယ်​
​ခေတ်​​ရေစီး​ကြောင်းဆိုတာ အချိန်​နဲ့အမျှ ​ပြောင်းလဲ​နေတာပါ။ ကျွန်​​တော်​တို့ ငယ်​စဉ်​က လမ်း​ဘေး လ္ဖက်​ရည်​ဆိုင်​ထိုင်​ပြီး သီချင်းတိတ်​​ခွေ နား​ထောင်​ရတာကို လူငယ်​တိုင်း တက်​မက်​ကြပြီး အမြဲနှစ်​သက်​စွာ ​နိစ္စဓူဝ တိုက်​တွန်းစရာ မလိုပဲ လုပ်​​လေ့ရှိကြပါတယ်​။အဲဒီ​နောက်​ ဆံပင်​အရှည်​ထားပြီး လမ်း​ဘေး ဂစ်​တာတီးကြတယ်​။ ဂစ်​တာမှ မတီးတတ်​ရင်​ လူရာ မဝင်​သလိုပါပဲ။ အဲဒီ​နောက်​ မင်းသား ​ကျော်​ဟိန်း စတိုင်​၊ ​ပြေငြိမ်း စတိုင်​၊ စိုးသူ စတိုင်​ ​နောက်​ဆုံး ​ကျော်​သူ လွယ်​အိတ်​ ဆိုပြီး အနီအစင်းကြား ချည်​လွယ်​အိတ်​ကို ပုခုံးအထက်​နားမှာ အထုံး ထုံးပြီး တက္ကသိုလ်​ ထဲမှာ လမ်း​လျောက်​ရတဲ့အခါ ငါဟဲ့ဆိုပြီး တလွင့်​လွင့်​၊ လွင့်​​နေသလို ခံစားမိသားဗျ။
​ဟော အခု​ခေတ်​ကြ​တော့ tattoo နဲ့ abs လို့​ခေါ်တဲ့ six pack ဘယ်​လီ ​ခေတ်​ဗျာ။ tattoo ထက်​စာရင်​ six pack က degree ဒီဂရီပိုမြင့်မယ်​ထင်​ပါတယ်​။ ဘယ်​လီ မရှိ၊ ဘယ်​လီ မ​ပေါ်ရင်​ပဲ ကစားသမား မဟုတ်​သလို၊ လူရာ မဝင်​သလို နဲ့ ..... လူ​ကောင်​က​ ပိန်​ပြီး ​သေး​သော်​လည်း ဘယ်​လီ​လေးများ ​ပေါ်​နေရင်​ပဲ ပြိုင်​စံရှား တစ်​​ယောက်​လို ဂုဏ်​ယူ​နေကြတဲ့ အချိန်​ကိုးဗျ။
ဒီ​လောက်​ လူတိုင်းစိတ်​ဝင်​စားကြတဲ့ six pack ကို သူ့ထက်​ငါ ပိုပြီး​ပေါ်လွင်​ ရရှိ​အောင်​ သိပ္ပံ နည်းကျ ​လေ့ကျင့်၊ ​နေထိုင်​နည်းကို လက်​တို့ပြီး​တော့ ​ပြောပါရ​စေဗျာ။
Abs ကို​​ပေါ်အောင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ကြမလဲ ?
* အစားအစာ ကို မှန်​ကန်​စွာ ​ရွေးချယ်​စား​သောက်​တတ်​ဖို့လို​ကြောင်း၊ ​ရေများများ​သောက်​ရန်​လို​ကြောင်း အဆီအဆိမ့်​ များကို ​ရှောင်​ရန်​ လိုအပ်​​ကြောင်း
* တစ်​ချို့က​တော့ ခန္ဓာကိုယ်​ မှ အဆီများကို မြန်​မြန်​ ​လောင်​ကျွမ်း တဲ့​ဆေး၊ ပိန်​​ဆေးများကို ​သောက်​ရန်​လို​ကြောင်း..
* တစ်​ချို့ကြ​တော့ ဘယ်​လီကို အကြိမ်​များများ ရိုက်​ခြင်းသည်​သာ အဓိက ကြလှ​ကြောင်း
* Zumba dance ကသာ ပိုမို သာလွန်​​ကြောင်း
တစ်​​ကျောင်း တစ်​ဂါတာ၊ တစ်​ရွာ တစ်​ပုဒ်​ဆန်း ဆိုသလိုပါပဲ တုတ်​ထမ်း၊ ဓားထမ်းပြီး ​ပြောဆို ငြင်းခုန်​ကြရပါလိမ့်​မယ်​။
​six pack ​ပေါ်​ရန်​ ဘယ်​လီရိုက်ခြင်း ​​တစ်​မျိုးတည်းကိုသာ အကြိမ်​ကြိမ်​ပြုလုပ်​ပြီး၊ တစ်​ခြား​လေ့ကျင့်​ခန်းများ မပြုလုပ်​ပဲ၊ ဘယ်​လီရိုက်​ခြင်းတစ်​မျိုးတည်း ကိုသာ တစ်​ပတ်​လျင်​(၅)ရက်​ ဆက်​တိုက်​ ​လေ့ကျင့်​ပြီး (၆) ပတ်​ ကြာ​သောအခါ၌လည်း မည်​သို့မျှ ​ပြောင်းလဲမှု မရှိ​ကြောင်းကို ​လေ့လာ​တွေ့ရှိချက်​​တွေအရ researchers ​တွေမှ အတည်​အလင်းထုတ်​ပြန်​ထားပါတယ်​။ပုံ(၁)မှာ ​လေ့လာကြည့်​နိုင်​ပါတယ်​။ဆိုလိုသည်​မှာ ဘယ်​လီရိုက်​ခြင်း တစ်​မျိုးတည်းကိုသာပြုလုပ်​ပါက မထိ​ရောက်​​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြခြင်းသာဖြစ်​ပါသည်​။
ရိုရှင်းလွယ်​ကူစွာပဲ six pack ​ပေါ်ရန် ​အောက်​​ဖော်​ပြပါ ​အ​ခြေခံ အချက်​ (၃)ချက်​ကို လိုက်​နာနိုင်​ရင်​ မလွဲ ဧကန်​ ရရှိပါလိမ့်​မယ်​။ သိပ္ပံနည်းကျ ဆက်​လက်​ ​လေ့လာကြည့်​ရ​အောင်​ပါ။
(၁)မှန်​ကန်​​သော အဟာရကို ​ရွေးချယ်​တတ်​ရန်​
Six pack ​ပေါ်ချင်​ရင်​​တော့ ဘယ်​လီသား ​ပေါ်မှာ ဖုံး​နေတဲ့ အဆီ​တွေကို ဖယ်​ရှားဖို့(သို့)​လောင်​ကျွမ်းသွားဖို့က အဓိက အ​ရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
အရိုးရှင်းဆုံးက​တော့ ကယ်​လိုရီ စားသုံးမှုကို ထိန်းချုပ်​ဖို့ပါပဲ။စားသုံးလိုက်​တဲ့ ကယ်​လိုရီထက်​ အသုံးပြုလိုက်​တဲ့ ကယ်​လိုရီက များ​နေမှ အဆီ​လောင်ကျွမ်းအား​​ကောင်းပြီး six pack ရပါလိမ့်​မယ်​။ပုံ(၂)တွင်​ ​လေ့လာနိုင်​ပါတယ်​။ ကယ်​လိုရီ အတိုးအ​လျော့နှင့်​ပတ်​သက်​၍ အားလုံးသိထားပြ်ီးဖြစ်​၍ အကျယ်​တ၀င့်​ မရှင်းပြ​တော့ပါ။
​လေ့ကျင့်​ခန်း​ရွေးချယ်​မှုဟာလည်း အဓိက ကျလှပါတယ်​။ အထက်​မှာ တင်​ပြခဲ့သလိုပါပဲ six pack ​ပေါ်ချင်​ရင်​ six pack ​ပေါ်မှာ ဖုံး​နေတဲ့ အဆီ​တွေကို ချဖို့၊​လောင်ကျွမ်း သွားဖို့လိုပါတယ်​။အဆီချ​တော့မယ်​ဆိုရင်​အဓိက အ​ရေးကြီးဆုံးနည်းလမ်း​တွေက​တော့ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်​တဲ့ မည်​သို့မျှ မလွဲတဲ့ နည်းလမ်း(၃)ခုရှိပါတယ်​။
(၁) Diet Only(အစားအ​သောက်​ ကယ်​လိုရီ ထိန်းချုပ်​သည့်​နည်း)
(၂) Diet + Cardio(အစားအ​သောက်​ထိန်းချုပ်​ပြီး cardio ​လေ့ကျင့်​ခန်းနှင့်​တွဲဘက်​ ​ကစားနည်း)
(၃) Diet + Cardio + Weights(အစားအ​သောက်​၊ cardio နှင့်​ တွဲလျက်​ ဝိတ်​များဖြင့်​ ​လေ့ကျင့်နည်း) တို့ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
အားလုံး သိရှိရန်​အတွက်​ အ​ခြေခံနည်း(၃)နည်းရဲ့ ကွာခြားချက်​ကို ထပ်​မံတင်​ပြပါ့မယ်​။
နံပါတ်​(၁) ကို​ရွေးချယ်​ပြီး diet only ဖြစ်​တဲ့ အစားအ​သောက်​ကိုပဲ ထိန်းချုပ်​စားသုံးနည်းကို ကျင့်​သုံးတဲ့ သူ​တွေဟာ (၁၂)ပတ်​ကြာချိန်​မှာ ခန္ဓာကိုယ်​ မှာ ရှိ​နေတဲ့ အဆီ​တွေ အနက်​မှ အဆီ​(၁၄.၆)​ပေါင်​​ခန့်​လောင်​ကျွမ်းပါတယ်​။
နံပါတ်​(၂) ကို​ရွေးချယ်​ပြီး diet + cardio ကို လိုက်​နာ ​လေ့ကျင့်​တဲ့ သူ​တွေဟာ တစ်​ပတ်​မှာ (၃)ရက်​ကစားပြီး၊ကစားချိန်​ တစ်​ချိန်​လျင်​ မိနစ်​(၃၀)မှ(၅၀)အတွင်း၊ (၁၂)ပတ်​ကစားမယ်​ဆိုရင်​အဆီ (၁၅.၆)​ပေါင်​​ခန့်ေ​လာင်​ကျွမ်းပါတယ်​။နံပါတ်​(၁)နှင့်​ သိပ်​ပြီး မကွာခြားလှပါဘူး။
နံပါတ်​(၃)ဖြစ်​တဲ့ Diet + Cardio + Weights ကို​ရွေးချယ်​တဲ့ သူ​တွေဟာ တစ်​ပတ်​မှာ (၃)ရက်​ကစားပြီး၊ကစားချိန်​ တစ်​ချိန်​ကို မိနစ်​(၃၀)မှ(၅၀)အတွင်း၊ (၁၂)ပတ်​ကစားမယ်​ဆိုရင်​အဆီ (၂၁.၁)​ပေါင်​ခန့်​ ​လောင်​ကျွမ်း​သော​ကြောင့်​ အခြားနည်း​တွေထက်​ ၄၄%-၄၅% ပိုမို​လောင်​ကျွမ်းတာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ အဆီချချင်​တဲ့ သူ​တွေအတွက်​ လက်​မလွှတ်​သင့်​တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်​ပါတယ်​။ဒါအပြင်​ weight training ပါတွဲ၍ ကစားရခြင်း​ကြောင့်​ အ​ရေပြား ​ပျော့တွဲခြင်းကိုလည်း မဖြစ်​​စေပဲ ကြွက်​သားများဖြင့်​ တင်းရင်းလှပ​စေပါသည်​။
Training program ကို​တော့ မိမိ၏ ခံနိုင်​ရည်​ သက်​လုံအ​ပေါ်မူတည်​ပြီး နည်းပြဖြင့်​ တိုင်​ပင်​၍ တစ်​ပတ်​လျင်​ ၄/၅ ရက်​ ​ရွေးချယ်​​လေ့ကျင့်နိုင်​ပါသည်​။Training program ကို​ရွေးချယ်​ရာတွင်​ compound exercise ​တွေကို​ အဓိကထား ​ရွေးချယ်​​လေ့ကျင့်​ရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။
(၃) တိုးတက်​မှုကို ​စောင့်​ကြည့်​ အကဲဖြတ်​ခြင်း
ဒီအဆင့်​ကလည်း မဖြစ်​မ​နေ သတိထားရမည့်​ အဆင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​။တစ်ချို့ကစားသမားများဟာ ကစား​နေရုံမျှနှင့်​ လုံ​လောက်​ပြီဟု အယူအဆ မှားတတ်ကြပါတယ်​။
မိမိ၏ ရည်​မှန်းချက်​ target က ဘာလဲ ? ။ အဆီ ဘယ်​​လောက်​ချမှာလဲ ?။ တစ်​ပတ်​ကို ဘယ်​နှစ်​​ပေါင်​ ကျရမလဲ? စသည်​ဖြင့်​ အမြဲ မပြတ်​ ဂရုစိုက်​​နေရပါမယ်​။
အဆီချတဲ့အခါမှာ မိမိ၏ ကိုယ်​အ​လေးချိန်​ဟာ သိသိသာသာ ထိုးကျသွားတာဟာ သိပ်​မ​ကောင်းပါဘူး။(သိပ်​ပြီး ဝ တဲ့သူ​တွေဟာ စစခြင်းမှာ သိသိသာသာ ကျတတ်​​ပေမဲ့ ၂/၃ လ ဆက်​တိုက်​ကျ​နေရင်​​တော့ ဂရုပြုရပါလိမ့်​မယ်​။)အဆီ/ ဝိတ်​မကျပဲ တန့်​​နေရင်​လည်း မ​ကောင်းပြန်​ပါဘူး။ အဲဒီ​တော့ အ​ကောင်းဆုံး standard က အဆီ ဘယ်​လိုကျရမှာလဲ ဆိုတဲ့​မေးခွန်းက ဖြစ်​လာပြန်​ပါတယ်​။ သိပ္ပံနည်းကျ အဆီချ​တော့မယ်​ဆိုရင်​ တစ်​ပတ်​မှာ မိမိကိုယ်​အ​လေးချိန်​၏ 0.7% အဆီကျ​နေရပါ့မယ်​။အဲဒီလို ကျ​နေမှသာ မိမိ၏ ကြွက်​သား tissue များဆုံးရုံးခြင်းမှ ကာကွယ်​နိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​။
ဥပမာ..​ပေါင်​ (၁၇၀) ရှိတဲ့ လူတစ်​​ယောက်​ဟာ တစ်​ပတ်​မှာ ကိုယ်​အ​လေးချိန်​၏ 0.7% အဆီကျရမယ်​ဆိုရင်​ (၁၇၀ × ၀.၇% = ၁.၂ ​ပေါင်​) ခန့်​ကျဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။ တစ်​ပတ်​လျင်​ ၁.၂ ​ပေါင်​ခန့်​သာ ကျသင့်​ပါတယ်​။ ဤကဲ့သို့ အဆီကျဆင်းမှသာ ကြွက်​သားများ ဆုံးရှုံးခြင်း မရှိပဲ ရည်​မှန်းချက်​ ကို အ​ရောက်​သွားနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒါ​ကြောင့်​ မိမိ၏ တိုးတက်​မှု၊ ရပ်​တန့်​​နေမှု ​တွေကို အမြဲအပြတ်​ သတိထား​စောင့်​ကြည့်​ပြီး နည်းပြနှင့်​ ​ဆွေး​နွေး တိုင်​ပင်​ရန်​လိုအပ်​ပါတယ်​။
(၁) မိမိခန္ဓာကိုယ်​မှ အဆီ​တွေ ​လောင်​ကျွမ်းသွားရန်​လိုအပ်​ပါတယ်​။
- အဆီ​တွေ​လောင်​ကျွမ်းဖို့အတွက်​ဆိုရင်​၊ ခန္ဓာကိုယ်​မှ ခွန်​အားကို စိုက်​ထုတ်​ အသုံးပြုရသည့်​ မည်​သည့်​လှုပ်​ရှားမှု/ ​လေ့ကျင့်ခန်းကို မဆိုပြုလုပ်​ရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။
ဥပမာ...​ဘောလုံးဝါသနာပါသူများအတွက်​ ​ဘောလုံးကန်​ရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။ ​
​ရေကူး ဝါသနာပါသူများ ​ရေကူးရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။
​ပြေးခုန်​ပြစ်​ ဝါသနာပါသူများ ​ပြေးခုန်ြ​ပစ်​ ပြုလုပ်​ရန်​။
Zumba dance ဝါသနာပါသူများ Zumba ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​ရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။ Cardio ဝါသနာပါသူလည်း ထိုနည်းလည်း​ကောင်းပါပဲ။
Weight lifiting ဝါသနာပါသူများလည်း မိမိဝါသနာပါရာကို ​လေ့ကျင့်​ရန်​လိုပါသည်​။
*တနည်းနည်းဖြင့်​ အဆီ/ကယ်​လိုရီ​လောင်​ကျွမ်းရန်​ ခွန်​အားကို စိုက်​ထုတ်​အသုံးပြုသည့်​မည်​သည့်​ လှုပ်​ရှားမှုမျိုးကိုမဆို ပြုလုပ်​ရန်လိုအပ်ပါသည်​​​။
(၂) Diet plan (သို့) ကယ်​လိုရီကို ထိန်းချုပ်​စားသုံးတတ်​ရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။
မိမိတစ်​​နေ့တာတွင်​ စားသုံးလိုက်​သည့်​ အစားစာများတွင် ပါဝင်​​သော စုစု​ပေါင်း ကယ်​လိုရီထက်​ မိမိတစ်​​နေ့တာမှာ အသုံးပြုလိုက်/ အသုံးချလိုက်​တဲ့ စုစု​ပေါင်း ကယ်​လိုရီ (​နိစ္စဓူဝကိစ္စများ + ​လေ့ကျင့်​ခန်းပြုလုပ်​ချိန်​တွင်​ အသုံးပြုလိုက်​သည့်​ ကယ်​လိုရီ)က ပိုမိုများပြားနေရန်​လိုအပ်​ပါသည်​။ ဤကဲ့သို့ စားသုံးလိုက်​သည့်​ ကယ်​လိုရီ ဟာ နည်းပါး​နေပြီး အသုံးချလိုက်​သည့်​ ကယ်​လိုရီကပိုမိုများပြား​သော​ကြောင့်​ ကယ်​လိုရီ balance အရ အသုံးချလိုက်​သည့်​အချိန်​တွင်​ လိုအပ်​သည့်​ ကယ်​လိုရီကို အဆီပို​တွေဆီမှ တဆင့်​ ရယူ ​လောင်​ကျွမ်းရ​သော​ကြောင့်​ အချိန်​ကြာလာသည်​နှင့်​ အမျှ အဆီများကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်​ပါသည်​။
ဒါ​ကြောင့်​ six pack လိုချင်​ရင်​​တော့ အထက်​တွင်​ တင်​ပြခဲ့သည့်​ အဆင့်​(၃)ဆင့်​ကို စနစ်​တကျ အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​ လိုက်​နာပါက မိမိလိုချင်​ တမ်းတ မက်​​မောသည့်​ six pack ကို​တော့ အများသူငါ မြင်​သာ​အောင်​ အကြွားပိုပြီး လှစ်​ပြနိုင်​ပြီ​ပေါ့ဗျာ။
Olympia Fitness Centre (သုဝဏ္ဏ)
MFTA Certified Trainer
Posted by Alex Aung at 2:47 AM
💢💢💯 Lean Body ရရန် လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များ ...
Google Chrome ကို ပရို တစ်ယောက်လို အသုံးပြုနည်းများ